Ny Echinochloa dia kararan-javamaniry maro ao amin' ny fianakavian' ny Poaceae, zana-pianakavian' ny Panicoideae, avy any amin' ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany sy toetany antonony mafana, izay ahitana karazana miisa 30 hatramin' ny 40. Miendrika ahitra ireo zavamaniry ireo ka mety maniry isan-taona na mandavan-taona, mitsangana na misandrahaka ny tahony, izay mety mahatratra 3,6 m.
Misy ireo karazana volena mba hohanim-boa (ny ampembambazaha) na hohanin' ny biby fiompy. Ny tena fantatra dia ny Echinochloa esculenta (ampemba japôney) any Azia Atsinanana, ny Echinochloa frumentacea (ampemba japôney) any Azia Atsimo ary ny Echinochloa stagnina ao Afrika Andrefana. Ny karazana hafa dia ahi-dratsy ho an' ny fambolena. Ny Echinochloa crus-galli no fantatra indrindra amin' izany, noho izy tsy mora fongorina. Ny Echinochloa oryzoides dia mitovy endrika amin' ny vary volena (Oryza sativa), ka sarotra ny miava azy.
Ireo zavamaniry ireo (indrindra ny Echinochloa crus-galli sy ny Echinochloa pyramidalis ary ny Echinochloa stagnina) sy ny tahaka azy hafa (ny Panicum maximum sy ny Sacciolepis africana), dia antsoina amin' ny teny malagasy hoe: ahibary, ahibava, ahidrano, ahilava, farimanga, karanga, osaosa, sarivary, songolo, tsimparifary, tsiparifary, sns.
Indreto ny sasany amin' ny karazany hita eto Madagasikara sy ny anarana iantsoana azy amin' ny teny malagasy:
Echinochloa colona: ahibary, akatambivy, varimbivihy, voloandro;
Echinochloa crus-galli: ahibary, ahidrano, karanga, osaosa, tsimparifarifotsy, tsimparifary;
Echinochloa pyramidalis: ahibava, ahidrano, ahilava, karanga, sarivary, songolo, tsimparifarimanja, tsimparifary;
Echinochloa stagnina: ahibary, ahidrano, farimanga, karanga, tsimparifarimanga, tsimparifarimena, tsimparifary
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Echinochloa&oldid=1038864"
Voaova farany tamin'ny 13 Oktobra 2021 amin'ny 08:49 ity pejy ity.